ManarakaMapa | NextMapping ™ - Miandrasa, mivezivezy ary mamorona ny hoavin'ny asa
NextMapping™ - Miandrasa, mivezivezy ary mamorona ny hoavin'ny asa
Boky vaovao “NextMapping ™ - Miandrasa, mivezivezy ary mamorona ny ho avin'ny asa ”Navoaka ary azo alaina amin'ny Amazon.
NextMapping ™ dia manome fitaovana sy paikady hanamafisana anao sy ny fikambanana anao hitondra ny ho avin'ny asa miaraka amin'ny fanavaozana, fahaiza-miasa ary mahay mifanaraka. Miaraka amin'ny fikarohana be momba ny ho avin'ny asa, ny firaketana an-tsoratra voaporofo ny fahombiazan'ny mpanjifa sy roa taona nahalasa azy ho iray amin'ny orinasa ambony indrindra 'mandeha any' manolo-tsaina Cheryl Cran dia manome ny tsiambaratelo manova ny fanovana manelingelina ho amin'ny fotoana sy tombony. NextMapping ™ dia modely azo tsapain-tanana izay mampiseho ny dingana hanampiana anao hitety ny ho avy miaraka amin'ny fahatokisana bebe kokoa amin'ny tontolo tsy dia azo antoka sy tsy azo antoka. Mampiasa ny fitsipiky ny maodely NextMapping ™ ianao dia hianatra ny fomba hiandrasana mora, hamakivaky ary hamoronana vina ho an'ny asa ho an'ny tenanao, ny ekipanao ary ny orinasanao izay mitondra tombony betsaka kokoa amin'ny fifaninanana.
Hianatra ny mpamaky:
Ny fironana manohina ny ho avin'ny asa anisan'izany ny fitondran-tenan'ny olombelona sy ny teknolojia
Ireo saina telo ilainao mba ho vonona ianao izao ary ho miova
Ahoana ny famakiana ireo famantarana ny fanovana mba hiandrasana sy ho mialoha ny hery manelingelina
Ahoana ny fampiasana ny NextMapping™ modely hamoronana kolontsaina sy orinasa efa ho vonona
Sariho ny drafitra ary alaivo drafitra ny paikady fohy sy fohy amin'ny fotoana hitomboana
Ahoana no hanomezana aingam-panahy ny hafa hiaraha-mamorona ny ho avy sy 'hitarika ny fiovana' hahatongavana any
Famakiana tsy maintsy vakina avy amin'ny rehetra miasa na mitarika orinasa amin'ny ambaratonga rehetra
“Nanararaotra nihaino an'i Cheryl Cran aho tamin'ny iray tamin'ireo lahateny nataony tamin'ny taon-dasa, ary ity boky ity no zavatra manaraka tsara indrindra ho an'izay liana amin'ny ho avin'ny asa sy ny fivoaran'ny tontolon'ny asa ankehitriny ka hatramin'ny rahampitso, anio. Ity boky ity dia tokony hovakiana sy hodinihin'ny mpiasa sy ny mpandraharaha rehetra amin'ny ambaratonga rehetra, hahafantarana izay manosika ny kolontsaina miasa vaovao (millennial and Get-Z) ary ny fomba ifandraisan'ny kolotsaina lova sy hivoatra amin'ireo kolontsaina ho avy ireo ho fanatanterahana iraisana ho an'ny ho avin'ny asa. Ny boky dia tokony horesahina amin'ny oniversite, amin'ny Today Show, na aiza na aiza no resahina ny fanantenana sy ny fivoaran'ny hoavin'ny asa. Cheryl's Infographics amin'ny faran'ny toko tsirairay amin'ity boky ity dia miasa amin'ny vidin'ny fidirana irery. Ny teknolojia, ny fitondran-tena ara-tsosialy ary ny psikolojia dia mifamatotra tsy misy ezaka amin'ny fanazavany izay mahatonga ny akademika sy ny fampiharana azo atao.
- Chester M. Lee, Mpanjifa Amazon
Ny ho avin'ny asa, ny fitarihan-tena sy ny fandaminana dia eto!
“Ny boky tsara indrindra amin'ity lohahevitra momba ny hoavin'ny asa ity.
Cheryl dia manome tantara maro sy torohevitra azo ampiharina izay raha tsy mamaky an'ity izao dia tena tsy mahita ny ho avy ianao. Ny fahatsapana fa manana hery Gen XI dia hanome fanamby ny tenako aho mba hanana toe-tsaina be olona sy mamorona ary olona voalohany! Misaotra an'i Cheryl nanoratra ity boky ity ary mizara an'izao tontolo izao noho ny hoavintsika izay tsara kokoa. ”
- Alice Fung, mpanjifa Amazon
Torolàlana tsara momba ny fomba hiomanana sy hanomanana ny ho avin'ny asa
"Amin'ny maha freelancer ahy dia hitako ny boky NextMapping ho mpitari-dalana tsara indrindra amin'ny fomba handaminana sy hiomanana amin'ny hoavin'ny asa. Mila eo an-tampon'ny fironana mamolavola ny fomba fiasan'ny orinasa aho. Manan-danja sy ara-potoana ho ahy ity boky ity. ”
- Michelle, Mpanjifa Amazon
Fanokafana ny maso ho amin'ny hoavin'ny asa
“Ity boky ity dia manao asa mahavariana ho an'ny ho avy ary manome dingana azo raisina sy azo refesina hiomanana amin'ny tontolon'ny asa miova. Ny fanoratana sy ny hevitra dia aseho mazava amin'ny fomba azon'ny olona mazoto mpamaky boky fandraharahana toa ahy. Tena manoro hevitra aho raha mitady hijanona mialoha ny fihodinan'ny fanavaozana. ”
- Keran S., Mpanjifa Amazon
Nomen'ny aingam-panahy ahy ny tanjaky ny teknolojia sy ny fiantraikany tsara.
"Cheryl dia manana fomba tokana sy manentana hizara ny fanapahana faratampony sy ny talen'ny talen'ny talenta izay mihoatra ny saina ary mifandray amin'ny antony manosika anatiny. Raha vantany vao namaky ny Toko 1 aho dia voadinika sy nahazo aingam-panahy avy amin'ny mety ho teknolojia sy ny fiatraikany tsara. Nankasitrahako manokana ny infografika ho an'ny toko tsirairay, izay nahatonga azy io ho mora ny mahita ny famerenana ny toko tsirairay indray mipi-maso - mamirapiratra! Ity boky ity dia fijery manentana ny fanahy amin'ny ho avy ary ny fomba ahafahan'ny mpitarika, ny mpikambana ao amin'ny ekipa ary ny mpandraharaha mamorona ho avy mivoatra. "
- Teresia LaRocque, Mpanjifa Amazon
Tsy te-hametraka io boky io ianao.
“Fanamby lehibe tokoa ny fitetezana ny ho avin'ny mpiasa. Famakiana mahafinaritra sy manazava ity. Tena mamporisika an'ity boky ity ho an'izay mitady hitombo sy hahomby amin'ny tontolo iainany. ”
- Christine, Mpanjifa Amazon
Drafitra ny hoavinao
“Ny NextMapping an'i Cheryl Cran dia manome anao fampahalalana lehibe momba ny fironana mamolavola ny tontolon'ny tena sy ny orinasa. Tiako ny fomba ahatongavan'izy ireo miditra sy mivoaka. Ny fironana lehibe, ny fiantraikan'ny tena manokana. Manoro hevitra mafy an'ity boky ity aho! ”
- Shelle Rose Charvet, mpanjifa Amazon
“Na dia tsy mpandraharaha na tompona orinasa aza aho dia mbola mankafy betsaka ilay boky ary tena manitikitika ny saina. Mamaky tsara! Manome ahy fomba fijery sy taratra vaovao momba ny tontolon'ny asa atsy ho atsy aho. Raha tsy misy fisalasalana, dia torolàlana mahasoa tokoa izy io miaraka amin'ny torohevitra tsara ho an'ireo mpandraharaha sy tompona orinasa. Manolora tena! "
- Wyatt Sze, mpanjifa Amazon
"NextMapping dia fijerena ny làlan'ny asa aman-draharaha eo amin'ny tontolo iray izay mitana toerana lehibe eo amin'ny orinasa AI sy robotika. Cheryl Cran dia manolotra fahitana momba ny ho avy izay tsy lavitra. Miresaka ny maha-zava-dehibe ny fijanonana eo ambonin'ny fikarohana ianao mba hitazomana ny orinasanao mankany amin'ny ho avy tsy very taloha. Mazava sy mahasarika ny fomba fanoratan'i Cran. Tiako ny namaky an'ity boky ity ary hitako fa tena nampahalala sy mahaliana. Ny boky dia soratana amin'ny fomba voarindra sy takatra izay mahatonga azy io ho mora vakina ary ny sary sy ny kisary nampiana an'io. Tena tiako ireo fizarana amin'ny faminaniana ary manohitra ny fomba fisainanao. Famakiana mahaliana sy mitaona fanahy. ”
- Emerson Rose Craig, mpanjifa Amazon
Tsy maintsy vakiana ho an'ny mpitarika, ekipa ary mpandraharaha
"NextMapping dia tsy maintsy vakiana ho an'ny mpitarika, ekipa ary mpandraharaha mba ho vonona amin'ny ho avy, IZAO! Hitako fa manome ahy dingana azo ampiharina ny boky ary tiako ilay maodely PREDICT. Manolora tena !! "
- WomenSpeakersAssociation, Mpanjifa Amazon
Fiantohana ny fahombiazana amin'ny ho avy
"Ny fahaizana mitety sy manararaotra ny ho avin'ny asa dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny asa aman-draharaha ankehitriny sy amin'ny ho avy, ary ny NextMapping dia manampy anao hanao an'izany amin'ny fampiasana ohatra, fitaovana ary fitarihana ny boky mazava tsara ireo dingana tokony horaisina. hitrandrahana fironana ary hifehezana ny fahombiazanao. Tsy momba ny robot ihany, ny AI, ny angona ary ny haitao izany. Boky iray momba ny olona, ​​ny ekipa, ny mpanjifa ary ny orinasa izany. Amin'ny maha mpanolo-tsaina ny varotra ahy dia hitako fa matanjaka be ilay dinika ao amin'ny toko "Ny ho avy no zaraina". Miova ny toe-tsain'ny mpiasa iray, ilaina ny fomba vaovao amin'ny orinasa izay hisy fiantraikany amin'ny mpiasa sy ny mpanjifanao. Na manao ahoana na manao ahoana ny toeranao, ny tsenan'ny asa na ny asanao, dia vakio ity boky ity raha te hitombo mandritra ny taona vitsivitsy ianao! ”
- Colleen, Mpanjifa Amazon
Manomana ny orinasanao ho an'ny ho avy
“Ny mpanoratra an'ity boky ity dia manamafy fa ny orinasa sy ny mpandraharaha dia tsy maintsy miomana amin'ny hoavin'ny asa satria miova izany vokatry ny AI, automatisation, robotika ary ny fiovana haingana be. Tena misy dikany izany: "NextMapping dia manampy amin'ny famadihana ireo visa ho avy ho vahaolana mamorona sy drafitra azo tanterahina ho an'ny… mpanjifanay" Ny orinasa consultant NextMapping dia handray ny ezaka avy amin'ny fikarohana ny fironana amin'ny ho avy ary afaka mandray soa avy amin'ny traikefa sarobidy ananany ianao. Ny mpanoratra dia mijery amin'ny antsipiriany ny fiantraikan'ny robotika eo amin'ny sehatry ny fahasalamana, ny famokarana, ny vola ary ny fivarotana antsinjarany. Mandinika ny fomba fiaina sy ny safidin'ny asa ataon'ny olona izy ankehitriny mba haminavina ny fironana amin'ny ho avy. Fanatanjahan-tena mahavariana sy famakiana tsara. ”
- M. Hernandez, Mpanjifa Amazon
Famakiana tena mahaliana
"Amin'ny maha tompona orinasa kely ahy, dia matahotra mafy ny fiheverana ny AI, automation ary robotika aho, saingy amin'ny tena marina, mieritreritra aho fa zavatra ilain'ny tompon'orinasa rehetra (amin'ny habe rehetra) ny mianatra, mitrandraka ary tena lasa mahafantatra momba ny fomba mety hisy fiantraikany amin'ireo tombontsoa ireo eo amin'ny toeran'ny orinasany. "NextMapa: miandrasa, mivezivezy ary mamorona ny ho avin'ny asa" dia manaparitaka mazava tsara ity hoavin'ny orinasa ity amin'ny fomba tena manokatra maso ary azo antoka fa tsy maintsy vakiana ho an'ny orinasa rehetra, eny fa na dia ireo izay milaza fa tsy ampidiro robotics, AI na automation ao amin'ny orinasan'izy ireo. Hanova ny fomba fisainanao ity boky ity amin'ny farany. ”
- Amy Koller, mpanjifa Amazon
Boky feno fampahalalana sarobidy
“Ity dia famakiana fohy tokoa saingy feno torohevitra sy paikady lehibe ho an'ireo mpandraharaha, tompona orinasa ary mpitarika hiomanana amin'ny ho avin'ny orinasa ary hijanona mialoha ny lalao mba hahomby hatrany na dia lasa mandeha ho azy aza ny orinasa. Amin'ny maha freelancer ahy dia tsapako fa hanampy ahy hiomana tsara kokoa ity boky ity ary hiaraka amin'ny fomba hiovan'ny orinasa sy hitomboany. Amin'ny maha olona miasa amin'ny orinasa kely ity boky ity dia hanampy ahy hitondra fampahalalana sarobidy amin'ny latabatra izay sady hanampy ny orinasantsika hitombo ary koa hanampy ahy hitombo ao amin'ny orinasa koa. Mahatsiaro aho fa tokony hamaky an'ity boky ity izay olona mahatsapa ny hoavin'ny orinasany dia miankina amin'ny fijanonana ankehitriny sy ny fikasana mialoha ny toerana mety hitomboan'ny orinasa! "
- Shanell, Mpanjifa Amazon
Ho avy ireo robot! Saingy mety tsy zavatra ratsy izany…
"Ny fandrosoana fotsiny ireo robot sy rindrambaiko voafehy AI dia mahavariana amin'ny lafiny maro, saingy misy heviny sy fampiharana azo ampiharina ihany koa. Ai dia afaka nanova ny fomba fiainantsika ao anatin'ny folo ka hatramin'ny roapolo taona ho avy, ary satria mandany ampahany lehibe amin'ny fiainantsika miasa isika dia mety hisy fiatraikany amin'ny tsenan'ny asa sy ny tontolon'ny asa izany.
Mora ny manao tsinontsinona ny revolisiona ara-teknolojia ho zavatra tsy mitranga mandritra ny am-polotaona roa taona, fa ny tena marina dia efa mitranga izany ary misy fiatraikany amin'ny fiainantsika, ary koa ny fiasan'ny orinasa marobe. Ny ankamaroan'ny mpivarotra DVD dia tsy nahita an'i Netflix tonga akory, ary Uber dia tsy teny mampihomehy fotsiny ho an'ireo mpamily fiarakaretsaka izay very ampahany lehibe amin'ny fidiram-bolan'izy ireo noho ny rindrambaiko finday avo lenta. Na tompona orinasa kely ianao na CEO amin'ny orinasa lehibe iray, dia mila mailo ny fanovana nataonao AI ary manomana ny hetsika tokony hataonao raha te hahita fahombiazana ianao ao anatin'ny folo taona. ”
- Rev. Stephen R. Wilson, mpanjifa Amazon
Boky fatra fampahalalam-baovao!
"Nextmapping" dia boky iray izay manome paikady sy hevitra momba ny fanomanana ny olona sy ny orinasa hifanaraka amin'ny endrika miovaova haingana amin'ny faharanitan-tsaina, automatisation ary robotika. Tena voarindra tsara ilay boky ary mora ho an'ny mpamaky ny mahita fa tena mahay tokoa ny mpanoratra ary mahatakatra tsara ny lohahevitra. Ny mpanoratra dia nitondra ohatra tena misy eo amin'ny fiainana sy fandalinana tranga mba hanampiana ny mpamaky hahatakatra ny maha-zava-dehibe ny fahafahany mampifanaraka haingana amin'ny fiovana haingana amin'ny haitao izay misy akony amin'ny lafim-piainana rehetra. Ny tena tiako indrindra amin'ilay boky dia ny fanafohezana PREDICT izay manampy ny mpamaky hamantatra mialoha ny ho avy ary hiomana tsara kokoa amin'izany. Ity boky ity dia tsy natao ho an'ny tompona orinasa sy ny mpitarika orinasa izay miahiahy momba ny fananganana orinasa mahazaka ny fiovan'ny vanim-potoana ihany. Ity boky ity koa dia be fampahalalana ary hahasoa izay rehetra tsy te ho tavela eo alohan'ny onjam-piovan'ny teknolojia. ”
- Faith Lee, Mpanjifa Amazon
Ho an'ny mpihaino mikendry sy ny zavatra mahaliana ho an'ny mpamaky rehetra.
“Taorian'ilay fanilihana mahazatra, ny boky dia manokatra ny teny momba ny mpanoratra, ny sasin-teny sy ny fizarana telo. FIZARANA VOALOHANY dia misy toko 2, Ny voalohany manazava fa "Ny ho avy dia ankehitriny" ary manontany hoe "Vonona ve ianao?" ho an'ny robots, drôna, AI ary ny fizotran'ny eritreritra samihafa momba ny isan'ny mpiasa vaovao hiatrehanao azy. Toko faharoa - "Ny ho avy, maminavina ny ho avy - ny fomba faminaniana" dia mamaritra ny toerana tokony hanapahanao hevitra amin'ny fotoana sy ny fiantraikan'ireto singa ireto eo amin'ny orinasao. FIZARANA faharoa dia misy toko 3 manadihady ny “Hoavin'ny asa.” Ny voalohany (Toko Fahatelo) "The Mindset of a Navigator of The Future of Work" dia manazava manokana izay ilana izany. Toko fahaefatra, "Nozaraina ny ho avy" dia manazava ny fomba tsy hitovizan'ny toe-tsain'ny mpiasa vaovao amin'ireo teo aloha izay mila fomba vaovao. Dimy, “Navigating Today's fanamby - Inona no Manaraka” dia mandinika ireo singa efa misy sy ho avy. FIZARANA FAHATELO dia misy toko 6 sy 7 izay manazava ny fepetra takiana amin'ny famoronana 'Culture of Trust' ao anatin'ny sehatry ny asa hiatrehana ny ho avy olombelona miaraka amin'ny Robots, AI ary Automation. Toko farany dia manasongadina ny NextMapping ny "Mamorona ny hoavin'ny asa sy mizara ny ho avy noforoninao". Ny lisitry ny "Loharano" sy ny Index manampy indrindra dia mamarana ny boky.
Fifanakalozan-kevitra: Ity dia iray hafa amin'ny boky be dia be izay miseho manampy ny tompona orinasa, ny CEO, ny COO et.al. amin'ny fiatrehana ny fiantraikan'ny antony maro. Nahazo ny fifantohan-tsaina lehibe indrindra ny automatisation hatramin'izao noho ny fitomboan'ny tahirin-kevitra mahatsiravina izay efa olana lehibe tsy mitsaha-mitombo miaraka amin'ireo boky marobe natokana amin'ny filana fanitarana ny Cloud sy ny fahafaha-mampivelatra solosaina Quantum. Vitsy no nifantoka tamin'ny singa manokana sy ny fandraisana anjaran'ny toetra mampiavaka ny taranaka samy hafa. Ity mpanoratra ity dia nanangona ny ankamaroan'ity fitaovana farany ity, toa somary fohy kokoa noho ny hafa novakiako, ary nanazava tsy ny fahasamihafan'ny mpandray anjara vaovao amin'ireo nosoloin'izy ireo ny hery miasa, fa ny fifandraisan'izy ireo amin'ilay mitombo haingana faritra amin'ny Robots. AI sy mandeha ho azy. Toy ny amin'ny ankamaroan'ny boky nosoratan'ny mpikabary matetika, dia misy famerimberenana be loatra izay azo odian-tsy jerena noho ny fampiasany 'mba hanomezana hevitra'. Amin'ny ankapobeny, fandraisana anjara mendrika indrindra amin'ny fitakiana fahalalana mitombo ho an'ny orinasa hivelomana amin'ity tontolo miovaova haingana ity. Izay mitondra eritreritra mahaliana ho an'ity mpamaky ity. Ny fanaraha-maso tsy tapaka izay takian'olona amin'ny toerana misy fahefana sasany hanomezana toky fa azo itokisana ny singa tsirairay ao amin'ny 'ekipa'. Rehefa mandray ny fanapahan-kevitra ireo ekipa vaovao dia olona iray monja tsy afaka manamarina no afaka mitondra valiny tsy tadidiny izay mampatsiahy ny fomba fiteny taloha - Ny rameva dia soavaly noforonin'ny komity iray. ”
- John H. Manhold, mpanjifa Amazon
“Ny boky vaovao an'i Cheryl dia famakiana tena ilaina ho an'ireo matihanina mavitrika vonona handray andraikitra sy handray ny ho avin'ny asa. Manampy anao ny fironana farany sy ny angon-drakitra sarobidy hamakafaka tsara ireo fanovana tampoka misy fiantraikany amin'ny hoavin'ny asa, ity boky ity dia fitaovana sarobidy ho an'izay maniry hahay handinika mialoha sy hitety ny ho avy miaraka amin'ny fahombiazana mitombo. ”
“Ao anatin'ny anjara andraikitry ny CEO, tokony ho afaka hitarika ny fikambanananao ianao, na manao ahoana na manao ahoana ny toekarena, hiatrehana ny fiovana eo amin'ny fiaraha-monina sy ara-teknika haingana sy tsy tapaka, miaraka amin'ny fanangonana ny valiny mety hitranga. Ny bokin'i Cheryl dia manome fandalinana tsara momba ireo fikambanana ho avy tsy maintsy andrandraina, ary koa manome ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fampiroboroboana ireo fanovana ho avy ilaina amin'ny fikambanananao. ”
- Walter Foeman, mpitan-tanàna, tanànan'ny Coral Gables
"Efa fantatro nandritra ny taona maro i Cheryl Cran ary mampiasa ny fikarohana ataonay ny firaisantsika mba hamakafaka tsy tapaka raha toa ka miasa amin'ny saina isan'andro mifantoka amin'ny fitomboana sy fanitarana isika. Miaraka amin'ny NextMapping, manome fitaovana ho an'ny vondron'olona mpandraharaha i Cheryl mba hanomanana ny fikambanany ho amin'ny tontolo ho avy izay hifindra amin'ny fitondran-tena sy ny teknolojia izay tsy nisy nieritreritra ny 20 taona lasa izay. ”
- John E. Moriarty, mpanorina & filoha, e3 consultantsGROUP
"NextMapping dia tsy maintsy vakiana ho an'ny mpitarika sy ny matihanina miasa manerana ny indostria. Rehefa mihazakazaka haingana sy tsy azo vinavinaina ny tontolon'ny asa, ny olona sy ny fikambanana dia tsy maintsy ho mailaka sy mahay mandanjalanja kokoa mba hitazomana hatrany. Cheryl dia manome topy maso ny amin'ny hoavin'ny asa miaraka amin'ny fironana sy ohatra miorina amin'ny fikarohana ary manome torolàlana azo ampiharina amin'ny mpamaky amin'ny fananganana fahaiza-manao fanovana fanakianana. "
- Liz O'Connor, Principal Associate, Group Daggerwing
“Mahavelom-bolo ny NextMapa! Raha toa ianao ka mpitarika raharaham-barotra mitady paikady hamindra ny fikambanananao amin'ny ambaratonga manaraka dia ho anao ity boky ity. Ankasitrahako ny fomba nitodihan'i Cheryl tamim-pahamarinana ary ny fikarohana nataony tamin'ny alàlan'ny angon-drakitra dia manome fahatokisana ny mpihaino azy.
"Cheryl Cran dia mpandahateny mpandahateny iray ary mpanoratra manentana ny mpitarika hijery lavitra ny ho avy tsy ho ela ary mitaona ny mpitarika hitety fanamby hahatratra ny tanjon'izy ireo. NextMapping dia mampiasa angon-drakitra mifandraika mba hanazavana ny lalana ary manome torohevitra azo ampiharina amin'ny fanatanterahana ny ho avy. Ao anatin'ny tontolon'ny asa sy sosialy izay mihazakazaka ny fiovana ary miova ny lalàna, io fahitana mazava sy lalana mankany amin'ny hoavin'ny asa io dia tsy nilaina velively. ”
“Ity boky ity dia dia mankany amin'ny ho avin'ny orinasa sy ny mpitarika. Izy io dia fampifangaroana mahafinaritra ny fahendrena eo amin'ny rafitra sy ny mpamonjy orinasa miaraka amin'ny fahalalana sy fahatakarana lalina ny natioran'olombelona sy ny fomba fiasan'ny rafi-piainana sarotra. Ny tena mahavariana dia ny fomba anehoan'ny mpanoratra ny tsy fitovizan'ny zavatra soratany sy ny maha-izy azy. Ny fizarana ny fahitany ny fomba hamoronana kolontsaina vonona sy ho avy no ahatongavany ho mpitarika ny evolisiona izay voaresaka mazava tsara sy voafaritra tsara ao amin'ilay boky. Sangan'asa manova lalao izay hitondra ny mpamaky mazava sy aingam-panahy ary faniriana handray andraikitra. "
- Danilo Simoni, mpanorina sy CEO an'ny BLOOM
“Raha ny momba ny fitetezana ny Ho avin'ny asa dia jiro hatrany ny Nextmapping. Manampy antsika hisoroka ireo vato misakana tsy hita maso io rehefa manoritsoritra ny lalana mivantana indrindra mankany amin'ny toeram-piasana misy mpamokatra sy mamokatra. Tsy safidy ny tsy fandraisana andraikitra satria manodidina antsika rehetra ny fiovana - ny asan'i Cheryl dia manome fahatokisan-tena ny mpitondra tsirairay hitarika ny tenany sy ny hafa. ”
- Christine McLeod, Mpitarika isan'andro, mpanamora mpitarika & mpanolotsaina
Toko 1 Preview
Cheryl Cran dia nizara topy maso tao amin'ny Toko 1 amin'ny boky vaovao, "NextMapping- Anticipate, Navigate and Create The Future of Work" natomboka tamin'ny febroary 2019.
Toko 2 Preview
Cheryl Cran dia nizara topy maso haingana tao amin'ny Toko 2. Ny amin'ny fampiasana ny fankatoavana ny lamina sy ny fironana amin'ny fitondran-tenan'ny olombelona mba hamaritana tsara kokoa ny hoavinao amin'ny maha-mpitarika, mpikambana ao amin'ny ekipa, mpandraharaha na fikambanana anao.
Toko 3 Preview
Ao amin'ny Toko 3 ny fifantohana dia ny fitadiavana ny ho avy miaraka amin'ny fomba fisainana futurista ary be dia be. Ny herin'ny fitehirizana ny eritreritra amin'ny zava-misy ankehitriny sy ny ho avy mba hamorona valiny vaovao ho avy.
Toko 4 Preview
Ny toko 4 dia mifantoka amin'ny ho avy dia zaraina, fizarana ara-toekarena ary fitarihana mizara. Millennial sy Gen Z dia maniry ny hiasa ao amin'ny toeram-piasana mizara sy misokatra.
Toko 5 Preview
Ao amin'ny Toko 5 ny fifantohana dia ny fitadiavana ny fanambin'ny fanovana nomerika, ny fitadiavana ary ny fitandremana ny olona tsara ary ny fomba hamahan'ireo orinasa ny sasany amin'ireo fanamby. Mitaky vahaolana vaovao sy famoronana ireo fanamby.
Toko 6 Preview
Ny toko 6 dia afaka manangana ny fanovana ilainao hananana kolontsaina fahatokisana. Ny ilain'ny mpitarika mamorona kolontsaina mangarahara izay ahafahan'ny ekipa mahatsiaro ho voaaro amin'ny fanavaozana, hiara-hiasa ary hiova.
Toko 7 Preview
Ity toko ity dia mifantoka amin'ny hoavin'ny zanak'olombelona amin'ny andron'ny robotika, AI, automation ary ny robotika. Mpiasa mitady asa be fanahy sy miasa kokoa amin'ny olona. Midika izany fa ny fifantohana amin'ny mpanjifa sy ny traikefa amin'ny mpiasa no tena mifantoka amin'ny teknolojia manohana ny teknolojia manohana ny maha-olombelona.
Toko 8 Preview
Cheryl Cran dia mizara sary mialoha ny Chapter 8 ao amin'ny bokiny vaovao, NextMapping- Anticipate, Navigate ary Mamorona Ny Hoavin'ny Asa. Miaraka ny zava-drehetra ao anatin'izany ny fizotran'ny NextMapping mba hanampiana ireo mpitarika, ekipa ary fikambanana hiomana amin'ny ho avy.
Cheryl Cran dia ho avy amin'ny #1 ho an'ny influencer an'ny asa, mpanolotsaina ambony indrindra manerantany ary nomena anarana ho iray amin'ireo mpitondra tenin'i Etazonia Avaratra. Mpanoratra boky fito izy, anisan'izany, "Ny zavakanton'ny fanovana - Fiovana fiovana eo amin'ny tontolon'ny haingam-pandeha".
Mpanolo-tsaina tena mikatsaka fanampiana, ireo mpitarika, ekipa ary mpandraharaha mba hanova, hampitombo ny fahaiza-miasa ary hitarika ny ho avin'ny asa amin'ny hafainganam-pandehan'ny fanovana. Ny asany dia naseho tao Washington Post, Huff Post, Metro New York, Gazety Entrepreneurte ary maro hafa.